လောကရဲ့ စည်းစိမ် – Hlataw.com
အဲ့ ဇာတ်လမ်းမှာမိမိချင်တဲ့မမများအန်တီများအားရည်ရွယ် စိတ်ကူးယဉ်ရေးသားထားဖြင်းဖြစ်သည် ဇာတ်ကောင်များမှာတကယ်ရှိသောကြောင့်အမည်လွဲထားပါတယ် … ကျွန်တော်နာမည်ဟာ မောင်မောင်ဖြစ်ပြီးအသက်၂၇ရုံးဝန်ထမ်းပါ။ ကျွန်တော်တို့ရပ်ကွက်မှာများသောအားဖြင့် တစ်ယောက်နှင့်တစ်ယောက်စည်စည်းလုံးလုံးရှိ တစ်ယောက်အကြောင်းတစ်ယောက်သိနေကြပါတယ်…. ကျွန်တော်ဧ၊်လီးမှာ ၅လက်မခွဲအရွယ်အစားသာဖြစ်ပြီး ငယ်ကတည်းကအပျိုကြီးများကိုစွဲလမ်းတတ်သူတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်…အောကားကြည့်ရင်လည်း..ဂျပန်မင်းသမီး တို့ကိုသာကြည့်ပြီးမှန်းထနေကြဖြစ်တယ် ..တစ်နေ့ကျွန်တော်ရုံးကပြန်လာချိန်ဘုရားပွဲတွေ့၍မြန်မာမုန့်ဝင်ခဲ့ပြီး ကျွန်တော်တို့အိမ်နဲ့မလှမ်းမကမ်းရှိ အန်တီ အိတို့ဆီဝင်လည်ခဲ့ပါသည်။ အန်တီအိသည်ေ၇ွှကြည်အလွန်ကြိုက်တတ်သူတစ်ဦးဖြစ်သည် အသက်၄၉နှစ်ရှိပြီးမုဆိုးမတစ်ယောက်ဖြစ်သည်။ခန္ဒာကိုယ်မှာ တင်ပဆုံကြီးပြီး ရုပ်ရှင်မင်းသမီးဝါဝါအောင်ဘော်ဒီထက်နည်းနည်းဝသူဖြစ်သည်။အိမ်တံခါးကိုတွန်းဖွင့်ပြီး “အန်တီအိရေ ..အန်တီအိရေ..”အော်ခေါ်သေည်လည်းထူးသံမကြား၍အိမ်တံခါးတွန်းဖွင့်ဝင်ကြည့်သော်အောက်ထပ်တွေ ဘယ်သူမှမရှိသောကြောင့်အပေါ်ထပ်တက်ကြည့်ပြီးအန်တီအိအခန်းအားကြည့်မိသောအခါ လီးအတုနဲ့အာသာဖြေနေသောအန်တီအိအားတွေ့သောကြောင့်ချောင်းမြောင်းကြည့်နေမိသည်
အန်တီအိဧ။်စောက်ဖုတ်မှာခလေး၂ယောက်မွေးထားသောကြောင့်ပြဲလန်နေသောလည်း မဲနက်နေသောအမွှေးများနှင့်စောက်ဖုတ်အုံမှာအလွန်အင်မတန်မှကြည့်ကောင်း၍ အန်တီအိပုံစံမှာအလွန်အင်မတန်မှလိုးချင်စိတ်ဖြစ်ပေါ်စေပါသည် ကျွန်တော်လည်းချောင်းဟန့်၍တံခါးခေါက်ကြည့်ရာ ပြာပြာသလဲနဲ့ “ဟာ သားလာလေ.”အန်တီ သား မြန်မာမုန့်ဝယ်လာလို့ အန်တီကြိုက်တတ်လို့” ပြီးတော့ ကျွန်တော်သူဘေးနားသွားထိုင်နေမိသည် လီးမှာအင်မတန်မှတောင်နေပြီး ..သူမျက်လုံးကကျွန်တော်လီးနေရာကိုကြည့်နေသည်။ ကျွန်တော်.၊ အန်တီဘာလို့အိပ်နေတာလဲ အန်တီအိ။ နေသိပ်မကောင်းဖြစ်နေလို့ သားလေးရေ.. ကျွန်တော်.ကျွန်တော်နှိပ်ပေးရမလားဆိုကာ ကျွန်တော်ပေါင်ကိုကိုင်လိုက်သည် ..ပြိးတော့ အန်တီရယ်ဘာလုပ်နေလဲ သားမြင်ပါတယ် ..သားလေ ..သား အန်တီနဲ့ဖြစ်ချင်မိတယ် အန်တီအိ… ကျွန်တော်။ အန်တီ ရယ်လီးကိုကြည့်ပါဦး ..ဆိုတော့ သူအရမ်းအံအားပြီးကြောင်ကြည့်နေတယ် ..ကျွန်တော်လည်းမထူးတော့ပါဘူးဆိုပြီး ဖက်ပြီးခွနေမိသည် ခြေမကိုင်မိလက်မကိုင်မိ လူကလည်းလိုးချင်နေတာနဲ့ သူကလည်းရုတ်တရက်ကြောင်နေတယ် ကျွန်တော်လည်းထဘီလှန်ပြီးအတင်းထိုးထည့်မိတယ် အဲ့အချိန်အခန်းထဲမှာစောက်ဖုတ်နံကထောင်းခနဲနဲ့ပိုတောင်လာပြီး အတင်းထိုးထည့်မိတယ်
.. စွတ်..အားးး သားရေ ဖြည်းဖြည်းလုပ်ပါ ပေးလိုးမှာပေါ့ ..မရတော့ဘူး သားလိုးချင်နေမိပြီဆိုပြီး…တရပ်စပ်စွတ်ကျုံးနေမိတယ် .. ဖွတ်..ဖွတ်…ဖွတ် ..ဖွတ် စွတ် ဖတ် ဖတ် ဖတ် ပါးစပ်ကလည်းကစ်ဆင်၇ိုက်ပြီးအကျီင်္မချွတ်ဘဲ ကလေးနှစ်ယောက်အမေနို့အုံကြီးကြီးကြီးကို စွပ်ကိုင်နေမိတယ် …အွတ် အွတ် အား အားကောင်းလိုက်တာ သားလေးရယ် ၁၀မိနစ်အခန့်အကြာမှာလရေတွေပန်းမိပါတော့တယ်.. အန်တီ..အရမ်းကောင်းတာပဲ သားရေ ဒါမဲ့နည်းနည်းမြန်တယ် ကျွန်တော်..မဟုတ်ဘူး အန်တီ သားအရမ်းလိုးချင်နေတာ ကြာပြီ ..ဒါကြောင့်တရစပ်လိုးတာမောမှန်းတောင်မသိဘူး ဆိုကာ သူကလည်းကိုယ့်လိးကိုဆွပေး ကိုယ်ကလည်းသူစောက်ဖုတ်နိူက်ပေးလုပ်နေမိသည်…။ ခဏကြာသော် အန်တီ..သားလေး ပြန်တော့လေ နောက်ကျနေမယ် ကျွန်တော်..ခဏသားအစိစုပ်ချင်လို့ဆိုကာ သူစောက်ဖုတ်ကိုကုန်းယက်နေမိသည်…. အားးးသားလေးရေ ဘယ်လိုတွေလုပ်နေတာလဲ ကောင်းလိုက်တာကွာ …အားး အားး…ကျွန်တော်လည်း သူစောက်ဖုတ်ပြင်တစ်ပြင်လုံးလျှာနဲ့လျက်လိုက် အစိကိုစုတ်လိုက် သူအတွင်းသားလေးလျှာနဲ့လိုးလိုက်လုပ်နေမိသည် ..အနံနံသော်လည်းမရွံမိတော့ အားး ကောင်းလိုက်တာ သားရေ အန်တီအိဟာ ကျွန်တော်ခေါင်းကို စောက်ဖုတ်နဲ့ဖိကပ်ထားတော့သည် ..ကျွန်တော်လည်းအန်တီခဏဆိုကာ အန်တီဖင်ပေါက်လေး လျှာနဲ့ကလိ လက်နဲလိုးလိုက် အကောင်းဆုံးအချိန်ခဏလေးဖန်တီးပေးနေတော့သည် ..၁၀မိနစ်ခန့်အကြာအန်တီအိမှာ သားရေ ..သားကိုစုပ်ပေးမယ်လေ .ဆိုတော့ ကျွန်တော်လည်းသူရင်ဘတ်ပေါ်ခွပြီးလီးကိုတေ့ထားပေးလိုက်သည်
ပလွတ် ပလွတ် ပြွတ် ပြွတ် ..အိုးး ကောင်းလိုက်တာ အန်တီ ဥတွေပါယက်ပေး …နို့အုံကြီးပေါ်မှာထိုင်၍ကျွန်တော်လည်းညှောင်နေမိသည်.. ပြွတ် ပလွတ် ပြွတ် အသံမျိုးစုံ့းနဲ့ချိုချဉ်အလားစုပ်နေသောအန်တီအိနူတ်ခမ်းအား ကြည့်ပြီးအရမ်းတောင်လာကာပေါက်ထွက်မတတ်ဖြစ်ဘာ၍ အန်တီ ..သားမပြန်ခင်တစ်ခါလိုးဦးမယ်နော် အန်တီအိ..။ သူကလည်း ဟွန်း ဟုဆိုကာ ရော့ ကုန်းပေးမယ် အန်တီသားလေးဖြည့်ဆည်းပေးတော့ ကျွန်တော်လည်းလီးကိုထိုးထည့်ကာ တစ်ရပ်စပ်ဆောင့်ပါတော့သည် ဖတ် ဖတ် ဖတ် ဖွတ် ပြွတ် အား အား အန်တီ အန်တီ ..သားလေးရေ သားလေး နဲ့ပထမတစ်ချီထပ်ပိုမိုကြာမိလေတော့သည်.. အန်တီ ပုံစံပြောင်း၇အောင်လေ အင်း သား ဟုပြောပြီး အန်တီအိ.. သားဘေးတစ်စောင်းနို့ကိုင်နူတ်ခမ်းလေးနမ်းခံချင်တယ် ဟုတ် ဟုပြောပြီးဘေးကိုစောင်းသူခြေထောက်ကိုကျွန်တော်ကိုချိတ်ခိုင်းပြီး နို့ကိုင် ကာကစ်ဆင့်ရိုက်ကာညှောင့်နေမိတော့သည် ..အားးအားးဖတ် ဖတ်ဖတ် ဖတ် ပြွတ် ပလွတ် ပတ် အရည်တွေနဲ့အနံ့တွေနဲ့ကြိုင်လိူင်ကာဆောင့်လိုးနေပါတော့သည် ..နောက်၂၀မိနစ်ခန့်အကြာဒုတိယမှီပြီးသွားလေပါတော့သည်.. နှစ်ယောက်အမောဖြေလျက် အန်တီ သားသွားတော့မယ်ဟုဆိုကာအကျီင်္ထ၀တ်ပြီး လီးမှာ အရည်တွေပေနေတာတွေ့တော့ ကိုယ်တော်ချောလာခဲ့ဟုဆိုကာရေချိုးခန်းထဲဆေးပေးကာ အန်တီအိ..သားနောက်လည်းလိုးပေးရမယ်နော် ကျွန်တော်..စောက်ဖုတ်ပြဲအောင်နေ့တိုင်းလာလိုးမယ်ဟုပြန်ပြောလိုက်သောအခါ ဟိ ဟိနဲ့ရီနေပါတော့သည်..။
ယခုကဲ့သို့အန်တီအိနဲ့လိုးနေသာ၂လလောက်ကြာပြီးနောက် မိမိမှာ ပြောင်း လိုးချင်စိတ်အသစ်တဖန်ပေါက်ဖွားလာပါတယ် သူကတော့အပျိုကြိးမလွင်ဖြစ်သည်..အပျိုကြီးမလွင်မှာ အသက် ၃၉နှစ်ရှိပြီးရပ်ကွက်ထဲသာရေးနာေ၇းအင်မတန်ပါသောသူတစ်ဦးဖြစ်သည်။တစ်နေ့ သာရေးအလှူတစ်ခုအတွက် လုပ်အားပေးသွားလုပ်ရာ နောက်ကျမှ ည၁၂နာရီလောက်မှပြီး၍ပြန်မယ်လုပ်ရာ ‘ဟဲ့ ကောင်လေး မောင်မောင်’နောက်မှခေါ်သံကြားလှည့်ကြည့်လိုက်ရာ..အပျိုကြီူဖြစ်သောကြောင့် ဟုတ် အန်တီ ခုပဲပြန်မလို့လိုက်မလားမေးလိုက်ရာ အပျိုကြီး..အေး သား ညကြိးဟယ် လိုက်ခဲ့မယ် … မိမိလည်းတူတူပြန်လာခဲ့ရာ အပျိုကြီးရဲ့ကိုယ်သင်းရနံလေးကြောင့်လီး တောင်လာပါတော့တယ် .အပျိုကြီးမှာခင်ဇာခြည်ကျော်မျက်နှာပေါက်ဖြစ်ပြီးခန္ဒာကိုယ်အချိုးအစားမှာ မပြည့်တပြည့်ဖြစ်သည်…ကျွန်တော်တို့တူတူလျှောက်လာကာလမ်းမှာစကားပြောလာပြီး လမ်းမှာခွေးတသိုက်တွေ့ရာခွေးများမှာအလွန်ဟောင်ပြီးနောက်ကလိုက်လာသောကြောင့် ဟဲ့ မောင်မောင် ..သား သားဆိုကာသိုင်းဖက်ပါတော့သည် မိမိလည်းဇိမ်ခံကာမတော်ထထိလိုအထာနဲ့ဖင်လေးဆုပ်ကိုင်လိုက် နို့လေးဆုပ်လိုက်လုပ်နေမိသည် …နောက်ခွေးများအားမောင်းပြီး ပြန်လာသောအခါ ငါနှယ့်ခွေးထက်ကြောက်ရတဲ့လူနဲ့လာတွေ့နေတယ် …ဟုပြောကာ ရီနေပါတော့သည်။
မိမိလည်းရပြီအေးဆးဆိုကာ ဖင်လေးဆုပ်ကိုင်လိုက် နို့လေးကိုင်လိုက် လုပ်ကာ သူတို့အိမ်ရှေ့ေ၇ာက်သောအခါ ဖင်လေးကိုတခါညှပ် လီးတောင်ရက်သားနောက်ကထောက်၍မနက်ဖြန်တွေ့မယ်ပြောကာနူတ်ဆက်ခဲ့ပါသည်.. သူတို့အိမ်တွင်သူအမများမောင်များရှိ၍လိုးချင်ရက် တောင်တောင်နဲ့ပြန်လာ၇ပါတော့သည် နောက်နေ့ အလုပ်ကပြန်လာအပျိုကြီးအိမ်နားကပ်သီရစ်သီလေးဝင်ပြီး အန်တီေ၇ ရှိလားဗျ နဲ့ဘာညာယောင်ပြီး ၀င်ကြည့်သောအခါအပျိုကြီးမှပြုံးပြီး ဘာလာလုပ်တာလဲ ဟုဆီးမေးလေသည် ..ဘယ်သူမှမရှိဘူးလား အင်း အလုပ်သွားကြတယ်ဆိုသောကြောင့် ကျွန်တော်..လာချစ်တာလေ အပျိုကြီး..ဟယ် ပြောရယ်လိုက်တာ.. ကျွန်တော်လည်းအတင်းအပျိုကြီးကိုဖက်ပြီးနို့ကိုင်ဖင်ကိုင်လုပ်ပေးနေမိသည် ခဏကြာသော် အပျိုကြိးအားချွတ်ခိုင်းပြီးကုန်းခိုင်းကာ လီးထိုးထည့်လိုက်တောသည် ဗျစ် ဗျစ် အားး သား ရယ်ကြပ်လိုက်တာ နာတယ် ဟ …ခဏပါ အန်တီကလည်း ဟဲဟဲ ရီကာ နာကောင်းလေးပါဆိုကာဆက်ထိုးထည့်လိုက်သည် ဗျစ် ဗျစ်နဲ့တဆုံးထိဝင်တော့ ဖြည်းဖြည်းဆောင့်မိလေတော့သည် တစ်ခုထူးခြားသည်မှာအန်တီအိလောက်မနံသော်လည်း မိမိမှာနံသော အန်တီအိစောက်ဖုတ်တောင်ပြန်သတိရနေမိသည် ကြိုက်သူဖြစ်သော်ကြောင့်ပဲလားတော့မသိ …။
ဒါနဲ့ကျွန်တော်လည်း ဆက်တိုက် ဆောင့်နေမိသည် ..ဖတ် ဖတ် ဘွတ် ဘွတ် အားအာ ကောင်းလာပြီး ကလေးလေး နာတော့နာတယ် အားအား ဗြစ် ဖွတ် ဖျွတ် ပြွတ် နဲ့ဆောင့်နေတုန်း လွင်လွင် ရေ လွင် လွင် အိမ်ရှေ့မှာအော်သံကြားလို့လရေတစ်စက်စက်နဲ့ချွတ်ကာ ..နောက်ဖေးကာနေထပြေးလာရတော့သည်.ကျွန်တော်လည်းတင်းကာအန်တီအိ် အိမ်ရှေ့တန်းဝင်ကာ အန်တီအိအားခေါ်ကြည့်လိုက်ရာ် အန်တီအိ် အန်တီအိ ဟေ သားဆိုကာ ထွက်လာသောကြောင့်တံခါးဖွင့်ပေးချင်းပဲ တန်းထဘီလှန်ကာအစိမ်းသတ် စွတ်လိုးနေမိသည် ..ဖွတ် ဖွတ် ပြွတ် ပြွတ် ဘွတ်..ဖတ် ဖတ် နဲ့၂၀မိနစ်ခန့်အကြာလရေတွေ အန်တီအိစောက်ဖုတ်ထဲပန်းမိတော့မှာ အသာပြေသွားတော့သည် .. အန်တီအိ..သားရယ် ဘာဖြစ်လာတာလဲဖြည်းဖြည်းလိုးပါ ကျွန်တော်..မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်၇ုံးကအပြန်အမ်းလိုးချင်လို့ပါ အေးပါသားရယ် ဒီစောက်ဖုတ်ကမင်းအတွက်ပါပဲိဆိုကာရင်ခွင်ထဲလာဝင်တော့သည် ကျွန်တော်လည်းအန်တီခဏ အိမ်မှာ ဒီနေ့အလုပ်တစ်ခုရှိတယ်ပြောကာထွက်လာပါတော့သည် နောက်နေ့ကျွန်တော်ရုံးကပြန်အလာ အပျိုကြီးမလွင်လည်း လမ်းထိပ်ကပြန်အလာတွေ့လို့ ကျွန်တော်…မ ဘယ်ကပြန်လာတာလဲ အပျိုကြီး..အဲ ကောင်လေးပေါတင်ကြီးမပြောစမ်းနဲ့ ကျွန်တော်လည်းအိမ်မှာဘယ်သူမှမရှိတုန်းမှန်းစဉ်းစားမိပြီး အန်တီရေ လာပါဦး ပြစရာရှိလို့ဆိုကာလက်ဆွဲခေါ်ကာအိမ်ထဲခေါ်လာခဲ့သည်။
အိမ်ထဲရောက်သော်အခါမှ အပျိုကြီးနိ့လေးကိုင်ကစ်ဆင်တန်းရိုက်တော့သည် အပျိုကြီးလည်းဘယ်ကတက်ထားမှန်းမသိ လီးကိုလာကိုင်ပြီး လျှာတွေရောသရေတွေရော ပလူပျံနေအောင်ပြန်ယက်ပါတော့သည် ကျွန်တော်တောင်ပြုံးပြီး ဟဟ မက ပိုကျွမ်းနေပါေ၇ာလားဗျ မေးလိုက်သော် အပျိုကြီးက ဟီးဟီး ဒါလား ဖေ့ဘုတ်ကလေ အမှောင်လောက ဂရုထဲဝင်ထားတာတဲ့ခုကြည့်ပြီးသင်နေပါပြီတဲ့ ပြီးတော့ ကျွန်တော်လီးကိုထုတ် မူတ်တော့တာပဲ သိပ်မကျွမ်းပေမယ့် အာငွေ့လေးကြောင့်လီးကတိုက်ပွဲဝင်၇န်အသင့်ဖြစ်လာပါတယ် ကျွန်တော်လည်းအပျိုကြီးကို အခန်းထဲခေါ် ခုတင်ပေါ်မှာပဲပုံမှန်တက်လိုးပါတော့တယ် … အပျိုကြီး….ဗျစ် အားးးးးးနားကောင်းလေးကွာ ကျွန်တော်လည်းဆက်တိုက်အချက်၅၀လောက်ဆက်တိုက်ဆောင့်လိုက်ပါတော့တယ် အာ အအအ အအအ အအဗွတ် ဗွတ် အားး ကောင်လေးရယ် အားး သားရယ် အားးး မမရယ် အပြန်အလှန်လျှာချင်းကစားပြီးလိုးနေမိတယ် ခဏညောင်းသောအခါ မမ နံရံပေါ်လက်ထောက်ကုန်းပေးပါလား အပျိုကြီး..ဘယ်လိုလဲ မမမကုန်းတတ်ဘူး ကျွန်တော်..ဟာဗျာ လိုးချင်နေပြီဗျာ ကုန်းတက်သလိုကုန်း အိမ်ကလူတွေလာတော့မယ်ဆိုကာ ကုန်းခိုင်းပြီး တစ်ရပ်စပ် အပြီးထိလိုးလိုက်တော့တယ် ဗွတ် ဗွတ် ဖွတ် ဖွတ် လရေတွေစောက်ရည်တွေပေါင်းရင်းထိစည်းကျပြီး ဖတ် ဖတ် ဖတ် ဖတ် ဖတ် အားး အာအအအအအလဥနဲ့ဖင်ရိုက်အသံတွေနဲ့ဆူညံကာ အအအအအ အာူးး မောင်လေး မမပြီးတော့ မယ် ပြိးတော့မယ် အအအ မမ မမ အအအအအားးးးးးးးးကျွန်တော်လည်းကလေးရနေမှရှော့ဆိုကာ မမ မြန်မြန်ထိုင် မမ ဆိုကာ ပါးစပ်ပေါက်ပိတ်လိုးကာပီးလိုက်ပါတော့တယ် အပျိုကြီး….သားေ၇ အေ၇တွေများလာကြီးလားး ကျွန်တော်…အားးချစ်လို့ စုထားတာလေ….မမရယ့် ဆိုကာအပျိုကြီးကို ရုံးပုဆိုးနဲ့သုတ်ပေးပြီးပြန်လွတ်လိုက်ပါတော့တယ်။
ပြန်ခါနီးတော့ သားရေ ငါတော့ခြေထောက်မနည်းထောက်နေရတယ် ဟုပြုံးပြုံးလေးပြောကာပြန်ထွက်သွားးပါတော့တယ်… ကျွန်တော်လည်းခုမှသတိထားမိတယ် အိမ်ကလူတွေလာရင်ကွိုင်ပဲလို့အခန်းထဲအနံပေါင်းစုံနဲ့ ကြမ်းတိုက်ကာအားယူကာထမင်းစားအိပ်ချလိုက်ပါတော့တယ် …မအိပ်ခင် မအိကတော့ ကောင်လေးယားနေတယ် လာလိုးပေးဆိုကာ မက်စင်ဂျာကစာပို့ပါသေးသည်ခဏလေးမအိရေ …ရုံးကအလုပ်များတယ်ဗျာလို့ပြန်ပို့လိုက်သောအခါစိတ်ဆိုးသောပုံလေးပြန်ပို့ပါသည်. အဲ့အချိန်တွင်မိမိလိုးချင်ပါသော်လည်း အားအင်ချွေတာနေရသောဘ၀ကို စာဖတ်သူပရိသတ်တို့နားလည်မည်ထင်ပါတယ် …. အပျိုကြီး မအိတို့ စောက်ဖုတ်တွေစားသုံးနေရစဉ်အသစ်တဖန်ဝင်လာသောသူမှာ အ၀တ်လျှော်သောကလေး၅ယောက်အမေ အဒေါ်ကြီးဖြစ်ပါသည် သူသည်ရုပ်မလှသောလည်း ချစ်သောကျွန်တော်အတွက် စွဲလမ်းစရာအရာလေးဖြစ်ကြောင်း ကိုနောက်တစ်ခန်းမှာဆက်လက်ရေးသားပါမယ်ဗျာ… ကျွန်တော်စနေနေ့၇ုံးပိတ်တုန်းအိမ်ရှေ့မှာထိုင် ဖေ့ဘုတ်သုံးနေတုန်း ပုံမှန်အ၀တ်လျှော်နေကြအန်တီရောက်လာပြီးအ၀တ်လျှော်နေတာပေါ့ ..သူနာမည်ကဒေါ်ရီတဲ့ဗျာ ခပ်၀၀ပဲ ဆောင်ကြောင့်ထိုင်နေတာက ဆင်းရဲတော့ အောက်ခံဘောင်းဘီတောင်မ၀တ်လားမသိဗျာ အမွှေးကိုနက်မှောင်နေတာပဲ ပေါလောပြီးတဲ့ တခုက ကျွန်တော်ကြည့်နေတာသူသိတယ်ဗျာ
သူလည်းနပ်နေတာပေါ့ ကိုယ်ကတော့ကြည့်လိုက်လီတောင်လိုက်ပေါ့ ..သူကရယ်ပြလိုက်ဖော်ပြလိုက်နဲ့ကျွန်တော်လည်းသိသိရက်ပဲထပြ တယ် တောင်နေကြောင်းပြတယ် ကျွန်တော်ကိုဒါလေးလျှော်ပေးပါဦးပြောလိုက်ပေါ့ တခုခက်တာကအန်တီအိကတရားစခန်းဝင်နေချိန် အပျိုကြီးကလိုးဖို့မလွတ်ချိန်ကျတော့ မောင်မောင်ငစားတို့ငတ်နေချိန်ပေါ့…အဲ့အချိန်သူက သားေ၇ အ၀တ်လှန်းဖို့..အပေါ်ထပ် အ၀တ်တွေလိုက်ကူပေးနိုင်မလားတဲ့ ကျွန်တော်လည်းရပါတယ်ပေါ့..။ ဟုတ်ကဲ့ခင်မျလို့ သူကအ၀တ်ခြင်းကြီးကိုင်ရှေ့ကတက်တာပေါ့ ကျွန်တော်လည်းနောက်ကကြည့်လီးတောင်တောင်နဲ့လိုက်ရတာပဲ….အ၀တ်လှန်းတော့ သူကိုမထိတထိလီးနဲ့ထောက်ကြည့်တယ် သူကရယ်ပြတယ် ကျွန်တော်လည်းနောက်ကဖက်ပြီးထောက်တာပေါ့ …လုပ်ချင်နေလားတဲ့ ကျွန်တော်လည်းဘာပြောကောင်းမလဲ ထဘီထဲခေါင်းဝင်မူတ်ရော ..ပလတ် ပြွတ် ပြွတ် အားး သားရယ် မရွံဘူးလားတဲ့ ရွံရင်လည်းရွံစရာ ကျူးကျော်မှာနေတာဗျာ နံစော်ပြီး အမွှေးတွေနဲ့ ကိုယ်တွေကနံလေကြိုက်လေပဲ ယက်ပစ်စုတ်ပစ်တာ ပလပ် ပလပ် ပြွတ် ပြွတ် အားး အားးအအအအ ပလတ် သားးရယ် ခဏခဏတဲံလီးထုတ်လေ တဲ့ ဒါနဲ့ထုတ်ပေးတော့ယက်တာဗျာ ပညာပါသလားမမေးနဲ့ လီးတံထိပ်ကိုလျှာနဲ့ကလိဆွဲစုပ်တာ ..အအားးအန်တီရယ်ကောင်းလိုကတာ ..အအ အအ အန်တီသားပြိးချင်တယ် ပါးစပ်ထဲပီးတယ့်လူပျိုငယ်ငယ်လေးလရေ သောက်ချင်တယ်တဲ့ အအအအခေါင်းကိုနံရံဆွဲကပ်ဆောင့်ပေးလိုကတာအချက်၃၀လောက်မျာပါးစပ်ထဲအကုန်ပန်းတာ သူသီးပါးသီးတယ်….
ကျွန်တော်လည်းပြီးတော့ ကျွန်တော်….အန်တီ တော်ပြီလား အန်တီ…သားရယ်လိုးခံချင်တယ်တဲ့ ကျွန်တော်…အန်တီဆောင့်ပေးပါလားဆိုတော့ အန်တီ….ဆောင့်ပေးမှာပေါ့ မောင်ရယ်တဲ့…။ ကျွန်တော်လည်းလှဲပီးထောင်ပးလိုက်တယ် သူကတက်ခွလီးကိုကိုင်တက်ထိုင်ပြီးတော့ ဆောင့်ရော အအ အအ မမ မမဆောင့် အအ မမ ဆောင့် ဘွတ် ပြွတ် ဘွတ် ပြွတ် အားးမောင်လေးရယ်ထိလိုက်တာ အအအ ဖတ် ဖတ် အားးး ကောင်းလိုက်တာနို့ကြီးတွေများကြီးလိုက်တာ စို့ရကောင်း ချိုင်းချွေးစောတွေ၇ာ ဖတ် ဖတ် ဘွတ် အားး မောင်လေးရယ်ကျွန်တော်လည်းအရမ်းကောင်းလို့အောက်ကပြန်ဆောင့်တာကောင်းလိုက်တာဗျာ တက်ညီလက်ညီပဲ…ဖတ် ဖတ် ဖတ် ဖတ် ဘွတ် ဘွတ်…အအအ ပြီးတော့ ကျွန်တော်…မမမျက်နှာလေးကြည့်လိုးချင်တယ် အန်တီ..ရတယ်လေမောင် ကျွန်တော်လည်းပက်လက်ပဲထပ်လိုးမိတော့တယ်… အအ အအ ဘွတ် ဘွတ် ဗျစ် အအအ မောင်လေးဆောင့်ပါ ဆောင့် အအ မ မမ အအအ ဖတ် ဖတ် ဖတ် ဘွတ် မမေ၇ မောင်လေးရေ မမရေ မောင်လေးရေ အအ အဖတ် ဖတ်အအ နောက်အချက်၁၀၀လောက်ကျတော့ အားးးးးကျွန်တော်လည်းပန်းမိလိုကတော့တယ် …သူကပြောသေးတယ် မမအရမ်းချစ်တယ်တဲ့ နောက်ဆိုဖင်ပါလိုးပေးပါတဲ့ကျန်သေးတာဗျာ လီးကိုပါးစပ်နဲ့လျှာလေးနဲ့သန့်ရှင်းရေးလုပ်ပေးသေးတယ် …အရမ်းချစ်မိသွားတာပေါ့ဗျာ ….ကျွန်တော်လည်းအန်တီအိ အပျိုကြီးနဲ့ဒေါ်ရီတို့သုံးယောက်ကို ပတ်လိုးရင်းနဲ့လောကစည်းစိမ်ရနေတာပေါ့….ပြီးပါပြီ။